Igumbi elinye kunye nosana kunye nenja
Igumbi lakho lokulala e iflethi eqeshisayo sinombuki zindwendwe onguDoris
Ukunqanda ukungaqondani, andirenti indlu okanye indlu epheleleyo. Ukongeza kwigumbi elinye, ndineentengiso ezi-3 ezahlukeneyo kwi-airbnb. Inika amagumbi ngamnye kwiindibaniso ezahlukeneyo. Le ndawo yeendwendwe ikumgangatho wokuqala wendlu yam; Apho ndihlala kumgangatho ophantsi. Imigaqo ye-2G isebenza ngaphandle kokukhetha.
Ibhedi yokuhamba ingalungiselelwa umntwana ohambahambayo. Kwaye kuhlala kukho indawo endlwini yam yezinja eziziphethe kakuhle.
Ubhubhani olandelayo we-corona uqhuba eJamani nakwihlabathi liphela. Abo bakukhanyelayo oku kwaye bafuna ukuhlala bengagonywa akufuneki bafunde ngokubhekele phaya. Andibavumeli abantu ukuba bangene endlwini yam abanengxaki yokulahlekelwa yinyani ngokupheleleyo okanye abanoluvo olwahlukileyo.
Iimeko ezikhethekileyo zifuna umgangatho ophezulu woxanduva lomntu. Nengqiqo. Qiniseka ukuba ufumanise malunga nemeko yangoku phambi kokuba uqale uhambo lwakho.
Sonke sifuna ukusebenzela ukuqinisekisa ukuba akukho zithintelo zokuhamba okanye ukuvalwa kwendawo yokuhlala kubuyayo.
Ngokomgaqo, imimiselo yococeko ekhethekileyo iyasebenza kwaye ugcine umgama wakho naphi na apho kunokwenzeka kwaye unxibe imaski endlwini ngaphandle kwegumbi elibhukisiweyo.
Igumbi likumgangatho wokuqala wendlu yam, eligcinelwe iindwendwe zam.
Ilungiselelwe abahambi abangatshatanga, yonke into iyafumaneka ngokuhlala okufutshane. Sinikezela ngebhedi yokuhamba kubantwana abancinci simahla, ukuya kuthi ga kwi-3 iminyaka abantwana abancinci bahlala NAM kwaye apha simahla. Ukuba uyafuna, unokonwabela inkqubo yeTV yesatellite eyahlukileyo.
Indawo yokuhlambela kufuneka yabelwane nezinye iindwendwe, kodwa ukuza kuthi ga ngoku akuzange kube yingxaki. Iitawuli zikhona.
Kukho ifriji epasejini kunye neketile egumbini. Ukutya kunye neziselo zomntwana osahambayo zinokufudunyezwa ekhitshini lam ngolungiselelo lwangaphambili.
Unokufumana imenyu yethu ekhethekileyo yesidlo sakusasa phantsi kwe "Ingcaciso engaphezulu" kwaye ixabisa i-6.50 €.
ibhedi elala umntu omnye eyi-1, \_u00A0Ibhedi yosana eyi-1
4.97 · Izimvo eziyi-32
Uya kuhlala kwindawo enobuhlobo apho wonke umntu uyazi kwaye abulise wonke umntu. Ukuncokola phezu kocingo nako kuhoywe.
Sithi ndlela ntle kwaye umbuliso weMoin Moin uyasebenza nangaliphi na ixesha losuku. I-Moin elula yanele ukuphendula. Kwakhona, gcina umgama wakho.
Okwangoku kunyanzelekile kwakhona ukuba ubulale iintsholongwane ezandleni zakho emva kokuwela umgubasi. Ibhotile iyafumaneka kwindawo yokungena kule nto. Ukukhuselwa komlomo kunye neempumlo kufuneka kwakhona kugqitywe endlwini xa kwenzeka ukudibana ngokuthe ngqo.
Umyalelo wosuku kukugcina umgama wakho naphi na apho kunokwenzeka.
Eli gumbi lenzelwe abahambi abangatshatanga, kwaye kukho nendawo yomntwana ohambahambayo ukuya kwiminyaka emi-3 ubudala. Ngale nto ndibonelela ngebhedi yokuhamba ngematrasi etofotofo simahla. Ukuba inja ikhona, ingahlala kwigumbi ngentlawulo eyongezelelweyo ye-3 ye-euro. Nangona kunjalo, kufuneka icaciswe xa ubhukisha.
Ngexesha lokuhlala kwakho, ndiza kuba sekhaya ixesha elininzi, ngoko ke ndingakuvuyela ukukunika ulwazi ukuba unayo nayiphi na imibuzo. Kungenjalo ndiyayihlonipha imfihlo yeendwendwe zam.
Okwangoku kunyanzelekile kwakhona ukuba ubulale iintsholongwane ezandleni zakho emva kokuwela umgubasi. Ibhotile iyafumaneka kwindawo yokungena kule nto. Ukukhuselwa komlomo kunye…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Haren (Ems)